WordPress: Fikarohana sy soloina MySQL amin'ny alàlan'ny PHPMyAdmin | Martech Zone
Acronyms sy Singkatan
Mpamorona Fanentanana amin'ny Analytics
Calculator amin'ny hevitra an-tserasera
Lisitry ny SPAM Referrer
Calculator momba ny haben'ny santionany amin'ny fanadihadiana
Inona ny adiresy IP-ko?
Brandemonium | 6-7 Oktobra 2021 | Konferansa virtoaly
Webinar: COVID-19 sy Retail - Paikady azo ampiharina mba hampitomboana ny fampiasam-bolanao Cloud Cloud
Mamorona dia an-tsehatra ho an'ny mpanjifa amin'ny Fintech | Ao amin'ny Webinar amin'ny fangatahana Salesforce
WordPress: Fikarohana sy soloina MySQL amin'ny alàlan'ny PHPMyAdmin
Alatsinainy, May 14, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nanamboatra fanovana kely tamin'ny firafako pejy aho androany. Namaky aho Bilaogin'i John Chow ary tamin'ny Bilaogin'i Problogger fa ny fametrahana ny dokambarotrao ao anatin'ny vatan'ny lahatsoratra iray dia mety hiteraka fitomboana be amin'ny fidiram-bola. Dean dia miasa amin'ny azy ihany koa.
Tao amin'ny tranonkalan'i Darren, nanoratra izy fa resaka tsotra fotsiny ny fihetsiky ny mpamaky. Rehefa eo an-tampon'ny pejy ilay sora-baventy, dia mitsipaka azy tsy misy ifantohany ilay mpamaky. Na izany aza, rehefa eo ankavanan'ny atiny ilay dokam-barotra, dia tsy hadino izany ny mpamaky.
Ho hitanao fa mbola manandrana manadio ny pejy fandraisam-bahiko aho - mametraka doka ivelan'ny lahatsoratra bilaogy. Azoko antoka fa ny fanovana an'io sy ny fampidirana olona azy ireo bebe kokoa dia mety hahazoako vola bebe kokoa; na izany aza, niady izany foana aho satria mety hisy fiantraikany amin'ny mpamaky izay tiako indrindra izany - ireo izay mitsidika ny pejin-tranoko isan'andro.
Ny iray amin'ireo olana tamin'ny fametrahana an'ity dokam-barotra ity ho eo amin'ny ankavanana ambony dia teto no nametrahako sary ho an'ny tanjona kanto ary hiakanjo ny sakafoko ary manavaka azy amin'ny feed hafa. Matetika aho mifandimby tapa-clipart na ankavanana na ankavia amin'ilay paositra amin'ny alàlan'ny:
Fanamarihana: Misy olona te hampiasa style ho an'ity, saingy tsy mandeha amin'ny laoniny ny fampifanarahana CSS.
Fanavaozana ny hafatra rehetra amin'ny alàlan'ny Fikarohana sy Fanoloana:
Mba hanovana mora foana ny sary tokana isaky ny lahatsoratra rehetra hahazoana antoka fa avela ho mendrika ny sariko rehetra dia azo atao mora foana amin'ny alàlan'ny fangatahana Fanavaozana ao amin'ny PHPMyAdmin ho an'ny MySQL:
fanavaozana table_name napetraka table_field = soloina (table_field, 'replacement_that', 'with_this');
Manokana ho an'ny WordPress:
havaozina `wp_posts` set` post_content` = soloina (`post_content`, 'replacement_that', 'with_this');
Mba hanitsiana ny olako dia nanoratra ny fangatahana aho hanoloana ny “image = 'havanana'” amin'ny “image = 'left'”.
NAOTY: Matokia tsara fa hamerina ny angon-drakitrao alohan'ny hanaovana ity fanavaozana ity !!!
Tags: MySQLmysql hisoloFikarohana MySQLhanoloanaSearch Marketingwp_posts
Douglas Karr Monday, May 14, 2007 Sunday, October 4, 2015
Douglas Karr no mpanorina ny Martech Zone ary manam-pahaizana fantatra amin'ny fanovana nomerika. Doug dia a Keynote sy Marketing ho an'ny daholobe. Izy no VP sy mpiorina Highbridge, orinasa iray manokana manampy amin'ny orinasa orinasa hanova nomerika sy hampitombo ny fampiasam-bolany amin'ny alàlan'ny teknolojia Salesforce. Namolavola paikady marketing sy nomerika ho an'ny Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Webtrends, ary SmartFOCUS. Douglas koa dia mpanoratra an'i Fitorahana bilaogy ho an'ny Dummies ary mpiara-manoratra Ny boky bizina tsara kokoa.
Sys-Con: Ilay tranonkala mahasosotra indrindra?
Inona no olana? Ary ny Jargon Analytics hafa
Mametraha valiny →
May 14, 2007 amin'ny 8: 46 AM
Toa tsara, Doug. Mieritreritra aho fa voatazona tsara ny fizotran'ny fidiranao.
May 14, 2007 ao amin'ny 6: 58 PM
Misaotra Slaptijack! Nanova ny haben'ny lohateny kely nataoko androany aho ary niasa tamin'ny elanelana sasantsasany tao amin'ny CSS. Tweakin, tweakin, tweakin!
May 14, 2007 amin'ny 11: 50 AM
Misaotra anao nanome fampahalalana bebe kokoa momba an'ity lohahevitra ity. Nahita doka havia na havanana voamarina teo amin'ny tranokala hafa aho ka toa toerana malaza io. Mikoriana tsara eo ankavanan'ny paositra ny doka nataonao.
Azoko atao ny mifamadika amin'ny fanamarinana ny dokam-bolako koa atsy ho atsy. Mahaliana ny mahita raha misy fidiram-bola fanampiny vokatr'izany.
May 14, 2007 ao amin'ny 6: 34 PM
Hanaraka azy ireo tokoa aho. Somary nidina kely izao ny fiheverana ankapobeny, ka tara ihany koa ny vola miditra. Homeko herinandro vitsivitsy izay hahitako azy! Azoko antoka fa hanao tatitra momba izany aho.
May 14, 2007 ao amin'ny 2: 51 PM
Mahazo zavatra ve ianao amin'ireo doka amin'ny faneva ao amin'ny pejinao index, Doug? Tsy nanao soa tamin'izy ireo aho.
Amin'ny ankapobeny, ny doka an-tserasera (180 sy 250 ny sakany) ary ny doka taorian'ny lahatsoratra (336 ny sakany) dia nahasarika ny sain'ny maro.
May 14, 2007 ao amin'ny 6: 56 PM
Mahaliana, Rick. Tena nikorontana aho nefa tsy lasa fanarahana ny doka amin'ny pejy hatramin'ny herinandro lasa teo. Hatreto, tsy misy tsindry amin'ny pejy fanondroana lehibe! Zavatra hojereko io.
May 15, 2007 ao amin'ny 2: 16 PM
Noho ny fahalianana. Nanova ny rakitrao modely ve ianao mba hampisehoana ny doka amin'ny hafatrao, na mampiasa plugin hitantanana ny toeran'ny doka ianao.
May 15, 2007 ao amin'ny 8: 58 PM
Mampiaraka aho. Manana ny PostPost plugin nosoratako… fa mbola tsy mahavita izay tena ilaiko. Angamba famotsorana iray na roa amin'ny ho avy?
Ny ambiny dia amboariko tsotra izao amin'ny lohahevitro.
Jul 28, 2007 amin'ny 3: 35 AM
manana olana amin'ny fanavaozana ny faharoa miaraka amin'ny "havanana" hiditra amin'ny MySQL
Havaozina ivr_data METY HITA (TIME, 2) = '00' AIZA (TIME, 2)! = '00';
Aug 7, 2007 amin'ny 8: 35 AM
Hey Doug. Nampiasa ny torolalanao fotsiny aho hanavao ny adiresy mailaka ao amin'ny WP DB. Niasa toy ny hatsarana. Misaotra.
BTW, dia nahita an'ity lahatsoratra ity tao amin'ny Google, nitady “amin'ny fampiasana ny fangatahana fanoloana ny MySQL.” Tonga tamin'ny faha-3.
Aug 7, 2007 amin'ny 10: 25 AM
Woohoo! Faha-3 tsara! Ny tranokalako dia toa nahazo toerana tsara tao amin'ny Search Engine nandritra ny taona lasa. Mampihomehy, ambony noho ny bilaogy Search Engine aho. 🙂
Dec 9, 2008 ao amin'ny 5: PM PM
toa niasa tsara kokoa ho an'ny MySQL ity .. ..
UPDATE Wp_posts SET post_content = soloina (post_content, 'soloina ity', 'miaraka amin'izany');
5 Jan 2009 amin'ny 6:55 PM
Nety tamiko izany
UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE (post_content, 'www.alznews.net', 'www.alzdigest.com');
angamba ny 'fanoloana' dia mila soratana
Ny X Note
7 Okt 2009 amin'ny 2:47 PM
Misaotra anao, mitady ity fangatahana ity aho
4 Nov 2009 tamin'ny 4:28 PM
Misaotra! Ny ahy dia nanitrikitrika ny hampiasa "tsy 'manodidina ny fitadiavana sy hanolo ny lahatsoratra. Nampiasako mba hamindrana ny angona SQL rehetra amin'ny tranokala iray mankany amin'ny iray hafa. Namonjy asa be dia be izany!
famolavolana tranonkala walmley
1 Mey 2011 tamin'ny 1:37 hariva
Vao haingana aho no naniry ny hisolo kofehy ao anatin'ny MySQL amin'ny sidina, saingy mety misy zavatra 2 ilay saha. Ka nofonosiko ao anaty REPLACE () ny REPLACE (), toy ny:
REPLACE (REPLACE (field_name, "izay tadiavinay", "soloina ohatra voalohany"), "zavatra hafa tadiavinay", "soloina ohatra faharoa")
Ity no syntax nampiasako mba hahitana soatoavina boolean:
SILO (soloina (saha, 1, "Eny"), 0, "tsia")
Manantena aho fa hanampy izany!
Inona ny hevitrao?	hanafoana ny valin-
Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.
Ireo Podcast Faramparany
Kate Bradley Chernis: Ahoana no itondran'ny faharanitan-tsaina artifisialy ny zava-kanton'ny marketing amin'ny atiny
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana, miresaka amin'i Kate Bradley-Chernis, tale jeneralin'ny Lately (https://www.lately.ai) izahay. Niara-niasa tamin'ny marika lehibe indrindra eran'izao tontolo izao i Kate mba hamolavola paikady atiny izay mitarika ny firosoana sy ny valiny. Izahay dia miresaka momba ny fomba anampian'ny faharanitan-tsaina an-tsokosoko hitarika ny valin'ny varotra atin'ny fikambanana. Tato ho ato dia fitantanana atiny AI media sosialy…
Tombony azo ampiasaina: Ahoana ny fomba hananganana fotoana ho an'ny hevitrao, raharaham-barotra ary fiainana manoloana ny olana rehetra
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana, miresaka amin'i Mark Schaefer izahay. Mark dia mpinamana be, mpanolo-tsaina, mpanoratra be laza, mpandahateny, podcaster ary consultant amin'ny sehatry ny marketing. Mifanakalo hevitra momba ny boky vaovaony indrindra, Cumulative Advantage, izay mihoatra ny marketing ary miresaka mivantana amin'ireo lafin-javatra izay mitaona fahombiazana eo amin'ny orinasa sy ny fiainana. Miaina amin'ny tontolo iray isika…
Lindsay Tjepkema: Ahoana no nahatonga ny horonan-tsary sy ny podcast tamin'ny paikad-barotra B2B be pitsiny
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana dia miresaka amin'ny mpiara-manorina sy CEO an'ny Casted, Lindsay Tjepkema izahay. Lindsay dia tao anatin'ny marketing nandritra ny roapolo taona, podcaster efa nahazatra, ary nanana vina hananganana sehatra hanamafisana sy handrefesana ny ezaka varotra B2B ... ka nanangana an'i Casted izy! Amin'ity fizarana ity dia manampy ny mpihaino hahatakatra i Lindsay: * Maninona ny horonantsary…
Marcus Sheridan: Ireo fironana nomerika izay tsy manisy fiheverana ny orinasa ... Fa tokony
Nandritra ny efa ho folo taona, Marcus Sheridan dia nampianatra ireo fitsipika nosoratany ho an'ny mpihaino manerantany. Saingy talohan'ny naha-boky azy, ny tantaran'ny River Pools (izay fototra) dia naseho tamina boky, famoahana ary fihaonambe marobe noho ny fomba tsy manam-paharoa amin'ny Inbound sy Content Marketing. Amin'ity Martech Zone Resadresaka,…
Pouyan Salehi: ireo teknolojia mitarika ny fahombiazan'ny varotra
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana, miresaka amin'i Pouyan Salehi, mpandraharaha serial izahay ary nanokana ny folo taona lasa hanatsarana sy hanamorana ny fizotry ny varotra ho an'ireo solo-varotra B2B orinasa sy ekipa fidiram-bola. Miresaka momba ny fironana teknolojia namolavola ny varotra B2B izahay ary mijery ny fomba fijery, ny fahaiza-manao ary ny teknolojia izay hitarika ny varotra…
Michelle Elster: ny tombontsoa sy ny fahasarotana amin'ny fikarohana amin'ny tsena
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana, miresaka amin'i Michelle Elster, filohan'ny orinasa Rabin Research Company izahay. I Michelle dia manam-pahaizana amin'ny fikajiana fikarohana qualitative sy qualitative izay manana traikefa lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny marketing, ny fampandrosoana ny vokatra vaovao ary ny fifandraisana stratejika. Amin'ity resaka ity dia mifanakalo hevitra izahay: * Nahoana ny orinasa no mampiasa vola amin'ny fikarohana eny an-tsena? * Ahoana no…
Guy Bauer sy Hope Morley avy any Umault: Fahafatesana ho an'ny horonantsarin'ny orinasa
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana, miresaka amin'i Guy Bauer izahay, mpanorina sy talen'ny famoronana, ary Hope Morley, tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny Umault, masoivohom-pivarotana horonantsary mamorona. Miresaka momba ny fahombiazan'i Umault tamin'ny famolavolana horonantsary ho an'ny orinasa mandroso amin'ny indostria miaraka amina horonantsary orinasa tsy dia manara-penitra izahay. Umault dia manana portfolio fandresena mahavariana miaraka amin'ny mpanjifa…
Jason Falls, mpanoratra ny Winfluence: Reframing Influencer Marketing mba handrehitra ny marikao
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana, miresaka amin'i Jason Falls, mpanoratra Winfluence izahay: Reframing Influencer Marketing hampirehitra ny marikao (https://amzn.to/3sgnYcq). Jason dia niresaka ny niandohan'ny marketing influencer hatramin'ny alàlan'ny fomba fanao tsara indrindra androany izay manome valiny ambony kokoa ho an'ireo marika izay mampiasa tetikady marketing influencer lehibe. Ankoatra ny fahombiazana sy…
John Voung: Maninona ny SEO any an-toerana mahomby indrindra dia manomboka amin'ny maha-olombelona
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana dia miresaka amin'i John Vuong ao amin'ny Search SEO eo an-toerana izahay, fikarohana voajanahary feno, atiny ary masoivohon'ny media sosialy ho an'ny orinasa eo an-toerana. Miara-miasa amin'ny mpanjifa iraisam-pirenena i John ary miavaka eo amin'ny mpanolo-tsaina SEO eo an-toerana ny fahombiazany: John dia manana mari-pahaizana momba ny fitantanam-bola ary mpandray nomerika taloha, miasa amin'ny nentim-paharazana…
Jake Sorofman: mamerina mamorona CRM hanovana an-tsakany sy an-davany ny androm-piainan'ny mpanjifa B2B
ao amin'io Martech Zone Resadresaka ifampiresahana, miresaka amin'i Jake Sorofman, filohan'ny MetaCX, mpisava lalana amin'ny fomba vaovao mifototra amin'ny valiny amin'ny fitantanana ny fivelaran'ny mpanjifa izahay. MetaCX dia manampy ny orinasa SaaS sy ny vokatra nomerika hanova ny fomba fivarotana, ny fanaterana, ny fanavaozana ary ny fanitarana miaraka amin'ny traikefa nomerika mifandray izay misy ny mpanjifa isaky ny dingana. Mpividy ao amin'ny SaaS…
Raiso amin ny alalan'ny Email
Makà mailaka famintinana miaraka amin'ireo lahatsoratra sy zava-nitranga ary podcast nataoko farany izay natolotra ao amin'ny boaty mailakao!
Daily Digest Digest isan-kerinandro
Subscribe to this site's RSS feeds Martech Zone Podcast amin'ny tafatafa
Martech Zone Resadresaka amin'ny Amazon
Martech Zone Resadresaka amin'ny Apple
Martech Zone Resadresaka amin'ny Google Podcasts
Martech Zone Resadresaka amin'ny Google Play
Martech Zone Resadresaka amin'ny Castbox
Martech Zone Resadresaka nifanaovana tamin'ny Castro
Martech Zone Resadresaka nifanaovana tamin'ny Overcast
Martech Zone Resadresaka nifanaovana tamin'ny Pocket Cast
Martech Zone Resadresaka nifanaovana tamin'ny Radiopublic
Martech Zone Resadresaka amin'ny Spotify
Martech Zone Resadresaka nifanaovana tamin'i Stitcher
Martech Zone Resadresaka momba ny TuneIn
Martech Zone Resadresaka RSS
Zahao ireo fanolorana finday
Tonga izahay Apple News!
Malaza indrindra Martech Zone Articles
© Copyright 2021 DK New Media, Zo rehetra voatokana
Back to Top | Terms amin'ny Service | politika fiarovana fiainan'olona | Disclosure
Analytics sy fitsapana
Ecommerce sy antsinjarany
Fivarotana finday sy tablette
Fanamafisana ny varotra
Lahatsary momba ny varotra sy varotra
Resadresaka amin'ny marketing
Mampiasa cookies ao amin'ny tranokalanay izahay mba hanome anao traikefa tena ilaina indrindra amin'ny fahatsiarovanao ny tianao sy ny famerenana mitsidika. Amin'ny alàlan'ny tsindrio "Ekeo", manaiky ny fampiasana cookies misy REHETRA ianao.
Aza mivarotra ny mombamomba ahy manokana.
Tantano ny fanekena
Vonjeo & raiso